Botswana inoti hongu zvakare kuKuvhima Nzou
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Kufamba Nhau » Botswana inoti hongu zvakare kuKuvhima Nzou
Botswana Kupwanya Nhau • Kuputsa Kufamba Nhau • Hurumende Nhau • Kodzero Dzevanhu • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Trending Now
Bazi rezvemamiriro ekunze, zviwanikwa, kuchengetedzwa kwenyika, uye Tourism muBotswana zvakazivisa kurambidzwa kweKuvhima Nzou mumashoko eFacebook uye vakati danho iri rakauya mushure mekubvunzurudzwa kwenguva refu nevatungamiriri venzvimbo, nharaunda dzakakanganiswa, NGO, mabhizinesi ezvekushanya, vanochengetedza pamwe nevanoongorora.
Bazi iri rakati kuwedzera kwenzou uye mhuka dzinodya dzimwe mhuka nekuda kwekurambidzwa kwaive nechinangwa pakurarama nekukuvadza zvipfuyo. Vanochengetedza vanotaura kuti hakuna kumbove nekukura nekukurumidza muhuwandu hwenzou uye zviitiko zvekupokana kwevanhu-nzou hazvina kukura zvakanyanya zvekuti zvinokonzeresa kuputswa kwemutemo wekuchengetedza.
Doctor Paula Kahambu, CEO weWildlife Direct, vakapikisa paTwitter yavo kuti kuvhima "nzou muBotswana hakuzodzikise kurwisana kwenzou" uye kuti pfungwa ye "kuvhima zvine mutsindo" yaive "oxymoron". VaKahambu vanotiwo kubvumidza vagari vemumusha kupfura nzou kunovakonzera kushushikana uye kunogona kutotungamira mukufa kwevanhu sezvo kunetsana kuri kuwedzera.
Kurambidzwa kwekuvhima kwakatanga kuiswa muna 2014 pasi paMutungamiri Ian Khama, uyo aizivikanwa semunhu anofarira kuchengetedza.
Mutungamiri Mokgweetsi EK Masisi vakatora chigaro chemutungamiri wenyika muna2018 uye vakatanga chirongwa chekubvunzurudza kuti vabvise chirango chekuvhima - Masisi akagumisawo mutemo wekurwisa hushori "kupfura kuuraya" mutemo uyo waibvumidza mauto kuuraya vanofungidzirwa kuti vanovhima zvisiri pamutemo.
Botswana iri kumusha kwechetatu chetatu dzenzou dzemuAfrica dzakasara savanna (vangangoita zviuru zana nemakumi matatu) sezvo huwandu hwevanhu hwakapunyuka vakauraya nyanga dzenzou dzakakanganisa vanhu mune mamwe matunhu ekondinendi.